Fantaro hoe rahoviana ary ahoana no hanomezana Metronidazole ny biby fiompinao | Tontolo alika
Ahoana ary rahoviana no mampiasa Metronidazole amin'ny alika
Lourdes Sarmiento | | aretina
Metronidazole dia zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny fitsaboana olombelona na amin'ny biby, satria antibiotika sy antiprotozoal izy io, izany hoe ampiasaina hiadiana amin'ny aretina ateraky ny bakteria anaerobika.
Ireo bakteria ireo dia mivoatra tsara kokoa noho ny tsy fisian'ny oksiôma maimaimpoana ary miteraka ratra toy ny fanindrohana amin'ny hoditra, tapaka ny taolana izay ahatongavan'ny taolana, ratra lalina ary matetika koa mivelatra manodidina ny vava sy ny siligaoma. Na dia miara-miaina ao amin'ny vatan'ny alika aza ireo bakteria ireo, rehefa ny mpandraharaha ivelany dia manova ny fifandanjan'ireo manomboka manafika ny sela, miteraka areti-mifindra lalina sy fahafatesan'ny sela. Noho izany antony izany dia ilaina ny fanafody sy ny fitsaboana.
1 Fampiasana sy fitantanana Metronidazole
2 Olana hafa hodinihina
Fampiasana sy fitantanana Metronidazole
Ny rafitra fiasan'ity antibiotika ity dia tanterahina satria manimba ny firafitry ny hecolloidal ny ADN. Amin'izany fomba izany dia manakana ny tsy fitambaran'ny asidra niokleika izy io. Ny fanafody dia entin'ny bakteria anaerobika sy ny protozoa, satria ireo zavamiaina ireo dia manana fahaizana manova ny Metronidazole amin'ny sela ary mamerina azy io amin'ny fomba mavitrika.
Ny fampiasana an'io fanafody io dia misy ifandraisany amin'ny aretina sy ny otrikaretina ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina, na dia omena azy ho an'ny rafitra urogenital, vava, tenda ary lesion amin'ny hoditra aza. Ny fampiasana azy dia matetika omena amin'ny aretina amin'ny gastrointestinal tract., mazava kokoa ao amin'ny tranga fivalanana.
Na izany aza, tsy maintsy raisina fa tsy ny tranga fivalanana rehetra dia avy amin'ny antony iray ihany ary noho izany dia tsy azo ovaina amin'ny fomba mitovy. Ny fampiasana Metronidazole dia voatokana rehefa voan'ny katsentsitra ny lalan-tsinay ary ny mpiambina dia azo jerena ao anaty seza, amin'ny ankapobeny dia alika kely amin'ny alika kely izany ary satria fanafody azo antoka izy io dia azo omena tsy misy olana.
Izy io koa dia ampiasaina amin'ny aretin'ny protôzônia izay miparitaka kongona. Ireo tranga dia mety miovaova ary miainga amin'ny fahasosorana kely amin'ny hoditra ka hatramin'ny krizy hemolytic izay milaza fa tsy fahampian-dra na fahatairana mihombo.
Fanafody an-trano hanesorana ny kongona avy amin'ny alika
Mahitanao ny famelabelarana azy amin'ny endrika takelaka ho an'ny alika olon-dehibe; syrup na fampiatoana ho an'ny alika kely sy tsindrona izay ampiasaina amin'ny tranga faran'izay mafy ary rehefa tsy maintsy entina intravenna ny fanafody. Ny safidy roa voalohany dia azo ampiasaina ao an-trano, eo ambany fanaraha-mason'ny veterinary hatrany.
Ny fatra omena dia ireo notondroin'ny dokotera foana, fa amin'ny ankapobeny sy am-bava dia 50 mg isaky ny kilao ny lanja ampiasaina isan'andro, eo amin'ny dimy ka hatramin'ny fito andro. Ny fatra isan'andro dia azo zaraina amin'ny ampahany mitovy ary omena indroa isan'andro, izany hoe 25 mg maraina ary 25 mg amin'ny alina.
Zava-dehibe iray tokony hotadidina fa ny fanafody dia tokony homena foana mandritra ny andro nanondroan'ny manam-pahaizana, na dia mihatsara aza ny alika. Ilaina tokoa ity fampahalalana ity satria ny famaranana ny andro amin'ny alàlan'ny fanafody dia mamela ny alika ho sitrana tanteraka sy sorohina ny fanoherana ny bakteria, izany hoe miseho indray ilay aretina.
Olana hafa hodinihina
Zava-dehibe ny Metronidazole dia tsy ampiasaina amin'ny biby misy hypersensitivity, tsy mahazaka fanafody na aretina aty. Ny fampiasana azy dia tsy maintsy fehezina mafy amin'ny tranga alika malemy na amin'ny vanim-potoana fiterahana., noho izany antony izany dia tokony hanatanteraka fandalinana mifanaraka amin'izany hatrany ny mpitsabo biby, mba hialana amin'ny mety ho fahasarotana alohan'ny hanomezana ity fanafody ity.
Matetika izy io dia tsy miteraka voka-dratsy, fa raha misy soritr'aretina faharoa dia mety hitranga izao manaraka izao: mandoa na very ny fahazotoan-komana, fahalemena, malemy, aretin-kozatra ary tsy fahita firy sy matetika, aretin'aty. Na izany aza, raha mahita drooling ianao, ra ao amin'ny urine na very ny fahazotoan-komana, dia tsy misy antony tokony hatahorana, satria ireo dia misy vokany kely. Na izany na tsy izany ary raha maharitra maharitra andro maro ireo fambara ireo, ny filamatra dia ny manao consultation veterinary.
Amin'ny tranga mitokana, hita fa miteraka pancreatitis ny Metronidazole, na izany aza, ilaina ny manisy fiheverana fa ny fampiasana maharitra dia mety hitarika amin'ny fivoaran'ny pancreatitis maranitra, amin'ny tranga mitoka-monina sasany dia mety ho lasa mitaiza. Araka ny voalaza tetsy ambony, toe-javatra mitokana ireo fa ilaina izany raha raisina. Ho an'izany dia ilaina ny fanaraha-maso ara-pahasalamana.
Ny fihenan'ny alikaola dia mety ho voka-dratsin'ny fitantanana an'io fanafody io ary afaka aseho ho toy ny tantely izay azo fantarina amin'ny fisehoan'ny mena, mamontsina eo ambonin'ny hoditra ary toy ny rashes izay mahatonga ny mangidihidy sy ny fikolokoloana ny hoditra na ny fifohana rivotra haingana. Amin'ny tranga farany dia ilaina ny mandeha haingana any amin'ny toeram-pitsaboana, satria mety hampidi-doza ny ain'ny alika.
Rehefa mihinana fatra tsy ampy na mandritra ny fotoana lava be ilay biby, dia mety hiatrika fahamamoana izy io, ary amin'izay dia hita miharihary ny olan'ny neurolojia ary azo fantarina tsara. Ny sasany amin'izy ireo dia fikorontanan-tsaina, fihenan-doha mitongilana, tsy fitoviana rehefa mandeha, misintona, henjana, mangovitra ary nystagmus izay fihetsiky ny maso tsy fidiny. Amin'ireny tranga ireny dia ilaina ny fitsidihana maika ny mpitsabo biby..
Zava-dehibe ny fiheverana ny tantaran'ny fitsaboana ny biby, indrindra raha manaraka fitsaboana na vitamina ianao, satria ny fiarahana amin'ny fanafody hafa dia mety miteraka vokatra tsy ilaina ary manindry ny asan'ny antibiotika an'ny Metronidazole.
Misy fanafody vitsivitsy izay manimba ny fahasimbana rehefa ampiasaina amin'ny Metronidazole, eto no voalaza fa telo amin'ireo malaza indrindra:
Cimetidine izay ampiasaina amin'ny tranga voan'ny gastritis mitaiza ary amin'ny fitsaboana sy fisorohana ny fery amin'ny vavony sy ny tsinay.
Phenobarbital dia nanondro ny fitsaboana epilepsy voalohany, ny fanintona mifantoka na amin'ny ankapobeny.
Warfarin dia nampiasaina hisorohana ny aretim-po, ny lalan-dra ary ny lalan-drà amin'ny lalan-drà sy lalan-drà.
Raha sendra misy an'io ny biby dia tsy maintsy ampandrenesina haingana ilay mpitsabo biby, raha tsy izany dia tandindomin-doza ny ain'ny biby. Tokony ho raisina an-tsaina fa misy zava-mahadomelina be dia be sy isan-karazany amin'ny famenony vitaminaNoho izany dia zava-dehibe ny tsy hamerana ny tenanao amin'ireo fanafody telo voalaza etsy ambony ihany izay manakana ny asan'ny Metronidazole.
Mikasika ny vidiny sy ny fizarana azy dia miankina amin'ny firenena tsirairay sy ny laboratoara manao varotra azy io, satria fanafody fantatra eran'izao tontolo izao ary ampiasain'ny fiarahamonina siantifika. Avy eo, Ny tsara indrindra dia ny miresaka amin'ny matihanina ary asaivo omeny ny fampahalalana momba izay safidy eo amin'ny tsena..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana ary rahoviana no mampiasa Metronidazole amin'ny alika
Ny zava-drehetra ho an'ny alikanao
Karakarao ny alikanao tahaka ny hikarakarany anao amin'ireto toro-hevitra ataontsika ireto:
Ricardo Leyva Tornes dia hoy izy:
Tena mahaliana ny fanehoan-kevitra, na dia dokotera aza aho, tsy eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ny biby, sarotra be ny mitantana biby fiompy ary vao mainka aza rehefa tsy misy fampahalalana manokana.
Valiny tamin'i Ricardo Leyva Tornés
Ny fiompiana alika izay ho toy ny alikakely foana
Alao ny lahatsoratra farany momba ny alika.